२०७६ भदौ १५ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
हरि खेतान सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने –प्रमुख डा. यादव
प्रस, वीरगंज, १४ भदौ/ हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस अन्तर्गत हरि खेतान सामुदायिक विद्यालयको त्रिपक्षीय अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम शनिवार सम्पन्न भयो । क्याम्पस परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षाको गुणस्तर, उपलब्धि र थप सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीबीच छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख डा. भगवानप्रसाद यादवले हरि खेतान सामुदायिक विद्यालयलाई मुलुकको एउटा नमूना विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै सोही योजना अन्तर्गत यसअघि कक्षा ११ र १२ सञ्चालनमा आइसकेको र यस वर्षदेखि कक्षा ९ शुरु भएको जानकारी गराए । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ लाई स्तरोन्नति गरी कक्षा १० सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख डा. यादवले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले नेपाल सरकारको कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा निजी विद्यFलयका विद्यार्थीले भन्दा बढी प्राथमिकता पाउने नीति रहेको चर्चा गर्दै उनले यस वर्ष सोही नीति अन्तर्गत हरि खेतान सामुदायिक विद्यालयका दुईजना विद्यार्थीले इन्जिनीयरिङ अध्ययनको फेलोशिपमा र सातजनाले एनइबी परीक्षामा नाम निकाल्न सफल भएको ब
उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउनु आवश्यक –मन्त्री यादव
प्रस, गरुडा, १४ भदौ/ उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । रौतहटको चन्द्रपुरमा सम्पन्न नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घको ११औं वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री यादवले इँटा उद्योगलाई नयाँ प्रविधियुक्त बनाइ वातावरणमैत्री बनाएर लैजान उद्योगीहरू तयार भए मन्त्रालयले समन्वय गर्ने र उद्योगीका अन्य समस्या समाधानका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । मन्त्री यादवले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर इँटा उद्योग सञ्चालन गर्नु व्यवसायी, सर्वसाधारण तथा देशलाई समेत फाइदा हुने भएकाले यसका लागि मन्त्रालयको तर्पmबाट आपूmले सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । मन्त्री यादवले इँटाविना पूर्वाधार निर्माण सम्भव नभएकोले देशको लागि महŒवपूर्ण उद्योगको रूपमा रहेको बताए । देशमा बन्द रहेका अन्य प्रकृतिका उद्योगहरू पनि सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका जानकारी गराउँदै मन्त्री यादवले काङ्ग्रेस सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना प्रदेश नं २ सरकारलाई बस्न दिएकोले सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भइरहेको बताए । इँटा उद्योगमा कार्यरत मजदूरलाई बैंकमार्पmत् भुक्तानी दिन सरकारले बल गर्नुमा नेप
संविधानको परिधिभित्र न्याय –मुख्य न्यायाधीश
विमला गुप्ता, वीरगंज, १४ भदौ/ ‘स्थानीय न्यायिक समितिको अवसर तथा चुनौती’बारे शनिवार वीरगंजमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल थर्ड एलायन्स वीरगंजको आयोजनामा भएको गोष्ठीमा बारा र पर्साका उपमेयर, उपाध्यक्ष तथा न्यायाधीशहरूको सहभागिता थियो । उच्च अदालतको वीरगंज इजलासका मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिल्लीराज आचार्यले न्यायिक समितिका संयोजकसँग कानूनको सम्बन्धमा कम जानकारी रहेको हँुदा न्याय सम्पादनको काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । निष्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन प्रत्याभूत गर्न समस्या रहेकोले अहिले पनि न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दाप्रति स्थानीयवासीलाई विश्वास नहँुदा जिल्ला प्रहरी तथा अदालत धाउने गरेको जानकारी गराए । उनले संविधानको परिधिमा रही न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा न्यायालयप्रतिको भरोसा अभैm वृद्धि हुने कुरामा जोड दिए । मुख्य न्यायाधीश आचार्यले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निस्स्वार्थ भावनाले न्याय सम्पादन गर्दा नागरिकमा विश्वास सृजना हुने बताए । उनले सयौं दोषी छुटोस् तर एकजना पनि निर्दोषीलाई अन्याय नहोस् भन्ने न्याय
बलिको सिनो बहिष्कार गर्ने चमार समुदायको निर्णय
विमला गुप्ता, वीरगंज, १४ भदौ/ पञ्चवर्षीय महागढीमाई मेलामा बलि दिइने राँगाको सिनो बहिष्कार गर्ने चमार समुदायले निर्णय गरेको छ। “यस वर्षदेखि बलिको रूपमा चढाइएको राँगालाई चमार जातिले सिनो भन्दै नउठाउने निर्णय गरेका छौं,” भेलामा सहभागी दलित अगुवाहरूले बताए । “आत्मसम्मानको लागि पूर्णरूपमा गढीमाई मेलाको सिनो बहिष्कार गरौं’ं नाराको साथ शनिवार बाराको चैनपुरमा भएको चमार जातिको अगुवा भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो । पाँच वर्षमा लाग्ने महागढीमाई मेला यस वर्ष मङ्सिरको दोस्रो सातादेखि हुने शुरू हुने भएको छ । मेलामा लाखौंको सङ्ख्यामा बोका, राँगा, परेवा, हाँस तथा बोकाको बलि चढ्ने गर्छ । मेला अवधिभरि चढाइने राँगाको बलिपछि त्यसको सिनोलाई चमार जातिले घरमा लगी मासुको रूपमा प्रयोग गर्ने तथा वर्षभरि खानका लागि सुकुटी तयार पारेर राख्ने चलन छ । महागढीमाई मेलामा चढाइने राँगाको सिनोलाई घर नलैजाने निर्णय गरेको दलित अधिकार समाज पर्साका अध्यक्ष मनोज रामले बताए । वैज्ञानिकरूपमा हेर्दा पनि सिनोले विभिन्न किसिमका रोग निम्त्याउने तथा समाजमा भेदभाव हुने गरेको कारण यो कार्यमा रोक लगाइएको समाजका अगुवा
मुख्य बाटो फराकिलो बनाउने चर्चासँगै व्यापारी र किरायादारलाई तनाव
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १४ भदौ/ सडक विभागले वीरगंजको मुख्य सडक फराकिलो गर्ने भनी दैनिक सूचना प्रकाशित गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा तथा पसलेहरूमा त्रास बढ्दै गएको छ । गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै मितेरी पुलसम्म २५/२५ मिटर दायाँबायाँ सडक फराकिलो गर्ने विभागले तयारी थालेपछि वीरगंजका पसले, व्यापारी तथा बासिन्दामा त्रास बढ्नुका साथै उनीहरू नयाँ बासस्थान तथा पसलको खोजीमा भौंतारिरहेका छन्। पसल तथा आवासका लागि उपयुक्त नयाँ कोठा नपाएर भाडामा बस्नेहरू तनावमा छन् । व्यापारिक सडक विस्तार आयोजना कार्यालय पथलैयाले सडक आसपासका अतिक्रमित जग्गामा बनेका घर, टहरा, पसल तथा भौतिक संरचना भत्काउन विगत दुई सातादेखि दैनिक सूचना जारी गरिरहेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यममा नियमित सूचना जारी भएपछि अब सडक विस्तार हुने नै भयो भन्ने सोचमा आपूmहरू पुगेको वीरगंज मेनरोडका व्यवसायीहरूले प्रतीकसँगको कुराकानीमा बताए । व्यापारिक मार्गको सूचनामा त्रिभुवन राजमार्गको गण्डकदेखि घण्टाघर, माईस्थान, आदर्शनगर, मकालु चोक, बिर्ता हँुदै रजतजयन्ती चोक र वीरगंज भन्सार हुँदै मितेरी पुलसम्म अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरच
बरामद साइकल सढेर गयो
प्रमोद यादव, पचगावाँ, १४ भदौ/ वन तस्करहरूबाट विभिन्न समयमा सबैया साझेदारी वन समूहले बरामद गरेको करीब चार दर्जन साइकल काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहको प्राङ्गणमा खिया लागेर काम नै नलाग्ने अवस्थामा साइकलहरू पुगेको वन उपभोक्ताहरूले बताएका छन् । उक्त साइकल लिलाम बिक्री गरेर राजस्व उठाउनुपर्नेमा वनगस्ती समूहको मेहनत र सरकारी राजस्व खेर गइरहेको उनीहरूको गुनासो थियो । सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लखनलाल साहसँग बुझ्दा बरामद साइकल बिक्रीको लागि टेन्डर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमैं लिलाम हुने बताए । यसैगरी, पर्साकै जङ्गल सीमासँग जोडिएका प्रहरी चौकी र वन कार्यालयहरूमा पनि ठूलो परिमाणमा बरामद साइकल खिया लागेर सडेर गइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
चट्याङले ठोरीमा एक वृद्धा घाइते, एक घरमा क्षति
प्रस, ठोरी, १४ भदौ/ ठोरी गाउँपालिका–२ को सुन्दरबस्तीमा शनिवार बिहान चट्याङ पर्दा एकजना वृद्धा घाइते भएकी छन् । घाइते हुनेमा ६६ वर्षीया राधिका अधिकारी रहेको स्थानीय विशाल नेपालले जानकारी दिए । घरमैं चिकित्सक बोलाएर अधिकारीको उपचार भइरहेको नेपालले बताए । घरनजीकै खसेको चट्याङले उनी बेहोस भएकी थिइन् । पूजाकोठामा बिहान पूजा गरिरहेको समयमा चट्याङ पर्दा उनी घाइते हुन पुगेकी हुन् । उनको अवस्था अहिले सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न ठोरी हेल्थ पोस्टका अहेब अशोक राउतले बताए । खाली खुट्टा जमीनमा रहेकाले चट्याड्ढो झट्का पर्दा उनी घाइते भएकी हुन सक्ने स्थानीय शिक्षक त्रिलोचन पराजुलीले जानकारी दिए । अधिकारीका छिमेकी रतन माझीको घरनजीकै बिहानको समयमा चट्याङ परेको नेपालले बताए । चट्याङले माझीको घरको विद्युत् मिटर, घरमा जडान गरिएका विद्युतीय तारलगायतका सामग्री क्षति भएको नेपालले जानकारी दिए । चट्याङले माझीको घरको एउटा खाँबोसमेत चिरा पारिदिएको छ । घरनजीकैको बडरको रूखमा परेको चट्याड्ढो असर माझीको घरसम्म पुगेको उनले बताए । चट्याङ पर्ने समयमा माझीका परिवार खाटमा रहेकाले कुनै मानवीय क्षति भने
मेहदीकला प्रतियोगिता सम्पन्न
प्रस, वीरगंज, १४ भदौ/ माउन्ट एडमन्ड माध्यमिक विद्यालयले तीजको उपलक्ष्यमा शनिवार विद्यालय परिसरमा मेहदीकला प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा विद्यालयका संस्थापक/निर्देशक अर्जुनशम्शेर राणाले मेहदी हिन्दू मात्र होइन मुस्लिम समुदायमा पनि लोकप्रिय रहेको बताए । मेहदीको शीतलताले तनाव, टाउको दुखाइ तथा ज्वरोमा समेत लाभ पुग्ने उनले बताए । सो अवसरमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनन्तकुमारलाल दासले नेपाली संस्कार, संस्कृति तथा परम्परा युवा पीढीलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएकोे बताए । कार्यक्रम संयोजक विद्यालयका नेपाली शिक्षिका रोशनी श्रीवास्तवले मेहदीको पारम्परिक डिजाइन जटिल हुँदै गएको तर राजस्थानी र अरबी डिजाइन लोकप्रिय रहेको बताइन् । सम्पन्न अन्तरसदन प्रतियोगितामा विभिन्न सदनका २० जना विद्यार्थीको सहभागिता थियो । एक घण्टा अवधि रहेको उक्त प्रतियोगितामा सहभागीले आआप्mनो आमा, काकी, दिदी र बहिनीको हातमा कैययन् प्रकारका मेहदीको डिजाइन कोरेका थिए । प्रतियोगिताको निर्णायक सलोनी रौनियारले मेहदीको पारम्परिक इतिहास, महŒव, औषधीय गुणबारेमा बताएकी थिइन् ।
उत्कृष्ट कुर्मी विद्यFर्थी सम्मानित
रवीन्द्रप्रसाद साह, कलैया, १४ भदौ/ कुर्मी सशक्तीकरण मञ्च बाराले २०७५ सालको एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ । समाजवादी पार्टीका कलैया नगर अध्यक्ष शिवनाथ पटेलको प्रमुख आतिथ्य तथा कुर्मी सशक्तीकरण मञ्च बाराका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पटेलको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कलैयाबाट परीक्षा दिएका कुर्मी विद्यार्थीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल जिपिए ३.७६ ल्याएकी पुष्पा पटेल, जिपिए ३.२ ल्याएकी पिङ्की पटेललाई एक/एक थान साइकल हस्तान्तरण गरी सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी, अमृता पटेल, साहिल पटेल, कृतिका पटेललाई पनि सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा सेवा आयोगका पूर्वसदस्य जोगिन्द्र राउत, हिन्दू परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तोष पटेल, रामराजा क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभु पटेल, तरुण दल बाराका अध्यक्ष लोकेश सिंहलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
हुलाकी सडक निर्माण कार्य अविलम्ब शुरु गर्न माग
माधव तिमिल्सिना, ठोरी, १४ भदौ/ जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका–२ मा हुलाकी सडक निर्माणको काम सुचारु नगरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । गाउँपालिकाको चमरीहोलदेखि चौतारासम्मको सडक निर्माणको ठेक्का सकारेको कालिका बानियाँ जेभीले साबिक ठोरीमा सडकको ग्रेडिङ गर्नेबाहेक माटो भर्ने, ग्राभेल गर्नेलगायतका काम नगरेर काम गर्न स्थगित गरेपछि ठोरीवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् । शनिवार गौतमनगरमा भेला भएका स्थानीयले ठेकेदार कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको क्रसरसमेत समस्या समाधान नभएसम्मका लागि सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरेका छन् । ठुटेखोलादेखि चौतारासम्म तत्काल सडक निर्माण कार्य गर्ने शर्तमा ठेकेदार कम्पनीले वडा नं २ मा क्रसरसमेत सञ्चालन गरेको थियो । हाल सोही क्रसरबाट ठेकेदारले सडक निर्माण भइरहेको गाउँपालिकाको अन्य ठाउँमा गिट्टी, बालुवा ओसारिरहेको छ । यसअघि ठुटेखोलादेखि चौतारासम्मको ८ किमि सडक निर्माण थाल्ने गरी ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले स्थानीयसँग लिखित प्रतिबद्धता गरेको वडाध्यक्ष किशोर तामाङले बताए । उनले ठेकेदार कम्पनीले दुईपटकसम्म स्थानीयसँग सडक निर्माण थाल्ने भनेर प्रतिबद्धता जन
समृद्धिको सपना र रूपान्तरणको धरातल
ओमप्रकाश खनाल आर्थिक समृद्धि र सुख प्रत्येकजसो सभा सम्मेलनको विषय बन्ने गरेको छ । तर यसको प्राप्ति कसरी हुन्छ? स्पष्ट आधार देख्न पाइएको छैन । समृद्धिको उद्देश्यमा पुग्न रणनीतिक योजना र कार्यान्वयनको अभाव छ । अबको मोटमोटी एक दशकमा नेपाललाई मध्यम आयसहितको राष्ट्रको सूचीमा उभ्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस अनुसारका आर्थिक रणनीति छैनन् । दोहोरो अङ्कको आर्थिक अभिवृद्धिका लागि आवश्यक वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको पूँजी उत्पादन कसरी हुन्छ ? अनुदान र ऋणका भरमा प्राप्त हुने समृद्धिले वास्तविक सुख दिन सक्छ त ? स्वदेशी पूँजी पर्याप्त नभएको स्थितिमा बाह्य लगानीको विकल्प छैन । यसका लागि लगानीयोग्य वातावरण चाहिन्छ । आन्तरिक लगानीकर्ता सरकारप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहिरको लगानी र दाताको विश्वास कसरी जित्न सकिएला ? दाताको लगानीमा जोडिएर आउने स्वार्थलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि विरोधाभासमैं जेलिएको छ । सङ्घीयतालाई लक्षित विकासको औजार बनाउनुपर्नेमा यो सत्ता उपभोगमा सीमित भइराखेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको नेतृत्व दिएर सरकार प्रभावकारी नियमन र अत्यावश्यकीय क्षे
आत्मोद्धारको लागि चेतावनी
गताङ्कको बाँकी... एक बालकले आप्mनो आमासँग भनोस् कि यो बरफ धेरै ठण्डा छ, यसलाई गरम गरिदिनुस्, यसलाई यस्तो बनाइदिनुस् कि न गलोस्, यो त सर्वथा असम्भव कुरा हो । बरफको प्रकृति गल्ने हो, यो त गल्छ नै । यस्तै नै यो आशा राख्नु कि यो शरीर रहिरहोस्, स्वस्थ रहोस्, धन–सम्पत्ति, मान–बडाई आदि बनिरहोस्–यो सर्वथा असम्भव कुरा हो । बालक ठूलो भएपछि सम्भवतः यस्तो हठ नगरोस्–उसमा बुद्धि आओस् । किन्तु यहाँनिर यो बुद्धि कहिले आउँछ, हामी कहिले ठूलो हुन्छौं, जब यस शरीरमा विश्वास नै गर्दैनौं ? यसलाई स्थिर राख्न चाहँदैनौं ? कुन दिन हुन्छ, जब यो बालपन हट्छ ? यहाँ आप्mनो उद्धार गर्नको लागि आएका थियौं कि दुःखरूप जड पदार्थहरूको सङ्ग्रह गर्नको लागि ? जुन जीवनमा परमात्मा प्राप्त हुन सक्थ्यो, सदा–सदाको लागि कृत–कृत्य, प्राप्त–प्राप्तव्य, ज्ञात–ज्ञातव्य हुन सक्थ्यो, परमानन्दको प्राप्ति हुन सक्थ्यो, त्यसैलाई विषयभोगहरूमा लगाइदियौं–यो कहाँको बुद्धिमानी हो ? आयु प्रतिक्षण समाप्त भइरहेको छ, मृत्यु प्रतिक्षण समीप आइरहेको छ–कहिले यस कुराप्रति विचार गरेका छौं ? कहिले विचार गर्ने ? कुन विद्यालयमा यसबारे अध्ययन हुन्छ ? रावण
२०७६ भदौ १४ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
जिल्लामा दिवाखाजा बन्द भएपछि विद्यालय जाने नानीहरूको सङ्ख्या पातलिंदै
ओमप्रकाश चौधरी/धर्मेन्द्र चौरसिया, १३ भदौ/ पर्साका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये १२ वटामा सञ्चालित दिवाखाजा चालू आवदेखि बन्द भएपछि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाको उपस्थिति विद्यालयमा पातलिन थालेको छ । बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएकोमा स्थानीय तह अन्तर्गत पर्साको कालिकामाई र धोबिनीबाहेक १२ वटै स्थानीय तह अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा वितरण कार्यक्रम शुरू भएको थियो । नयाँ शैक्षिकसत्र र सोभन्दा पहिलेदेखि दिवाखाजाको व्यवस्था भएपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको थियो । खाजाको लागि पनि विद्यालय जाने प्रवृत्तिमा विकास भएको थियो । यसैगरी, टिफिनपछिको समयमा दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको कारण त्यसपछिका कक्षामा पनि विद्यार्थीहरूको राम्रFे सहभागिता हुने गरेको थियो । टिफिन समयमा खाजाका लागि घर जाने विद्यार्थीहरू त्यसपछिका कक्षामा सहभागी हुन विद्यालय आउँदैनथिए । चालू आव २०७६/७७ को साउनदेखि दिवाखाजा कार्यक्रम रोकिएको छ । कुनै स्थानीय तहको सभा नभएर बजेट अभावले दिवाखाजा रोकिएको छ भने कतै यस आवदेखि विद्यालयमा दिवाखाजा नखुवाउने र सोबापत मासिक रकम एकमुस्ट
राजनीतिक दबाबबीच राम्रो काम गरेको मेयर सरावगीको दाबी
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ/ तन्नेरी युवा समाजले शुक्रवार वीरगंजका मेयर विजयकुमार सरावगीसँग निर्वाचित भएपछि हालसम्म गरेका पाँचवटा कामबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । मेयर सरावगीको चौतर्फीरूपमा विरोध हुन थालेपछि समाजले मेयरसँग अन्तत्र्रिmया गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागी तन्नेरी युवाहरूले मेयर सरावगीलाई उनले गरेका पाँच राम्रा कामको गन्ती गराउन आग्रह गरेका थिए । प्रतिउत्तरमा मेयर सरावगीले स्थानीय तह गठन भएपनि कागजीरूपमा मात्र अधिकार दिइएको र अहिले पनि अधिकारबाट वञ्चित राखिएको गुनासो गरे । उनले महानगरपालिकामा साधनस्रोतको अभाव, कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधिहरूको किचलो र राजनीतिक दबाबका बीच आपूmले अहिलेसम्म राम्रो काम गर्दै आएको दाबी गरे । उनले आपूmले भौतिक विकासभन्दा पनि सामाजिक विकासलाई महŒव दिएको बताए । मेयर सरावगीले आपूmले महानगरको शिक्षाको अवस्था सुधारमा बढी जोड दिएको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन शुरू गरेको, ईहाजिरी, सिसिटिभी जडान गरी विद्यालयको निगरानी महानगरबाटै शुरू गरेको बताए । प्रविधिसँग जोडेको कारण शिक्षकहरू समयमा नआउने, कक्षामा नपढाउने जस
सानी नानीको ठूलो काम
प्रस, पचगाँवा, १३ भदौं/ हतपत बाटोमा भेटिएको नगद, सामान बच्चाहरूले आप्mनो अभिभावकलाई दिन्छन् । तर दीपनारायण माध्यमिक विद्यालय औराहा पचगाँवामा कक्षा १ मा अध्ययनरत सोनी पासवानले बाटोमा भेटिएको दुई हजार नगद र मोबाइल प्रधानाध्यापक शिवनाथ चौधरीलाई तीन दिन पहिले दिएकी थिइन् । आज शुक्रवार उक्त नगद र मोबाइल धनीलाई प्रअ चौधरीले हस्तान्तरण गरिदिएका छन् । विद्यालय जानेक्रममा सोनीले तीन दिनअघि बाटोमा दुई हजार नगद र मोबाइल भेट्टाएकी थिइन् । भेट्टाएको नगद र मोबाइल उनले प्रअ चौधरीलाई दिइन् र आज सो नगद र मोबाइल कौवावन कटैयाका रामविश्वास पटेलको भएको पुष्टि भएपछि उनलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रअ चौधरीले बताए ।
रोटरीले बनायो विद्यार्थीका लागि आधुनिक बस बिसौनी
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ/ रोटरी क्लब अफ वीरगंज मेट्रोपोलिसले बनाएको आधुनिक बस बिसौनीको उद्घाटन भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले शुक्रवार रिबन काटेर बस बिसौनीको उद्घाटन गरे । रोटरी क्लब अफ वीरगंज मेट्रोपोलिस निरन्तर समाजसेवामा लागिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । विगतमा यस क्लबले पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा स्नानघर तथा शौचालय निर्माणमा सहयोग गरेको थियो । पर्सा जिल्लाको जीराभवानी गाउँपालिकाको महादेवपट्टिस्थित शिवशक्ति प्राविका विद्यार्थीलाई बर्सेनि शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दै, विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि विगत ६ वर्षदेखि सहयोग पनि पु¥याउँदै आएको छ । दीर्घकालीन समाजसेवा अन्तर्गत विपन्नवर्गको उत्थानका लागि नितनपुर बारामा २९ दलित पासवान परिवारलाई बङ्गुरपालनका लागि सहयोग पनि गरिरहेको छ । यस योजना अन्तर्गत क्लबले ती परिवारलाई चार चरणमा बङ्गुर र बाख्रा वितरण गर्ने लक्ष्यअनुरूप दुई चरणको काम पूरा गरिसकेको छ । त्यसैगरी, गत वर्ष पर्सालगायत छिमेकी जिल्लाका १२५ जनालाई वीरगंजमा शिविर स्थापना गरी निश्शुल्क कृत्रिम हातखुट्टा प्रदान गरेको छ । क्लबकी वर्ष
चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ/ प्याब्सन वीरगंज महानगरले चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । बुद्ध फाउन्डेशनको हलमा आयोजित चित्रकला प्रतियोगितामा चार समूहमा १७६ जना विद्यार्थी सहभागी थिए । उनीहरूमध्ये समूहगतरूपमा प्रिन्स तामाङ, सुमित कुशवाहा, सुमेधा खण्डेलवाल र विद्या रौनियार प्रथम भएका थिए । निर्णायकमण्डलका श्याम श्रेष्ठ र शङ्करमान श्रेष्ठले प्रत्येक समूहबाट प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ गरी चारजनाको चयन गरेका थिए । समूहगतरूपमा विजयीहरूलाई प्याब्सन पर्साका पूर्वअध्यक्ष लालबाबू पटेलले शिल्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । कार्यक्रम प्याब्सन वीरगंज महानगरका अध्यक्ष आलोक चौरसियाको अध्यक्षतामा भएको थियो भने पर्सा अध्यक्ष हरिशङ्कर साह, कार्यक्रम संयोजक सुशीला साहलगायतको सहभागिता थियो ।
ठोरीमा पुनः हात्ती आतङ्क, धानबाली नष्ट
माधव तिमिल्सिना, ठोरी, १३ भदौ/ हात्ती आतङ्कबाट सधैंजसो पीडित ठोरी गाउँपालिकामा यस वर्ष पनि जङ्गली हात्तीले दुःख दिन थालेको छ। बिहीवार राति पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रवेश गरेको दर्जनभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको हात्तीको झुन्डले वडा नं ४ को विजयबस्तीमा करीब डेढ बिघा धानबालीमा क्षति पु¥याएको छ । स्थानीय मनकुमारी श्रेष्ठको १ बिघा, माइली श्रेष्ठको ५ कट्ठा र अन्य २ जनाको ५ कट्ठा धानबाली हात्तीले कुल्चेर र खाएर क्षति पु¥याएको निर्मल मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठले बताए । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले हात्ती नियन्त्रणका लागि दुई आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर बनाएको विद्युतीय तारबारभन्दा अन्यत्रबाट बस्तीमा प्रवेश गरेर हात्तीले धानबाली नष्ट गर्न थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करीब ७५ लाख र २०७५/७६ मा करीब २९ लाख रुपैयाँ निकुञ्जले लगानी गरेको थियो । जीराभवानी गाउँपालिका–२ बसन्तपुरदेखि ठोरी गाउँपालिका–४ निर्मलबस्तीसम्म २० किलोमिटर जङ्गल किनारमा तारबार गरिएको छ । तर हात्तीले तारबार गरेको ठाउँ छोडेर शिकारीबास खोला हुँदै धानखेतमा प्रवेश गरे
गरीबको सफलता र मध्यवर्गीयको असफलताको रहस्य
अमरनाथ पटेल मलाई धेरै दिनदेखि एउटा विचारले सताइरहेको थियो– एकजना गरीब मानिसको सफलता तथा एकजना मध्यमवर्गीय मानिसको असफलताको कारण के हो ? गरीब मानिस निकै अभावसँग जुधेर पनि कसरी सफलताको शिखरसम्म पुग्न सक्छ ? यद्यपि त्यही एक मध्यमवर्गीय मानिस जोसँग आप्mनो लक्ष्य पूरा गर्ने निकै साधनस्रोत हुन्छ तर पनि ऊ आपैंmले निर्धारण गरेको ठूलो लक्ष्यसम्म पुग्न किन यति गा¥हो हुन्छ अर्थात् आप्mनो ठूलो लक्ष्य पूरा गर्नमा असफल हुन्छ । कसरी एकजना गरीब मानिस आपूmलाई विश्वकै धनी, मूल्यवान र महŒवपूर्ण व्यक्तिको सूचीमा पार्न सकिरहेको छ ? जस्तै जुत्ता सिउने मानिस लुई पाश्चर पाश्चराइजिङ पद्धति तथा रेबिज भ्याक्सिनको आविष्कार गरेर आपूmलाई यस संसारको एक उत्कृष्ट वैज्ञानिकको सूचीमा सहभागी गराउन सफल भए । किताब पढ्नको लागि एकजना मानिस एक न्यायाधीशको घरमा नौकरको कार्य गरे तथा एकजना साथीसँग किताब मागेर पढेर भ्mयालमा राखिएको बेला रातिमा वर्षा भएर सो किताब बिग्रिएकोले उक्त किताबको मूल्य चुक्ता गर्न ती मानिसले किताबमालिकको खेतमा काम गर्न पनि हिच्किचाएन र पछि उक्त व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भयो । उनी थिए अम
भक्त थरीथरीका !
मुकुन्द आचार्य सबैभन्दा विचित्र यो संसार छ । यस विचित्र संसारमा अनेकथरी भगवान् छन्, अनेकथरीका भगवान्का भक्त छन् । भगवान्को सन्दर्भमा हामी हिन्दूहरू धेरै धनी छौं । कतिको त यौटा मात्र भगवान् हुन्छ । हाम्रा भगवान् त तैत्तीस करोड छन् । सूर्यदेव, नलदेव, वायुदेव, अग्निदेव, नागदेव, वृक्षदेव, पृथ्वीमाता, गङ्गामैया, यमुनामैया, गणेशजी, लक्ष्मीमाता, सरस्वतीमाता, मृत्युदेव (यमराज–चित्रगुप्त), ब्रह्मा, विष्णु, महेश यसरी गन्दै र भन्दै जाने हो भने मान्छे बोर–बोर महाबोर हुन सक्छ । यसरी भगवान्का असङ्ख्य साना–ठूला मध्यम श्रेणीका अधम श्रेणीका (भूत–प्रेत–पिशाच–डायन–साकिनी आदि) अनेक नाम–रूप–महिमाले हाम्रा वेद–पुराण–महाभारत–रामायण–भागवत गीता, स्मृति, ब्राह्मण ग्रन्थ सबै टनाटन भरिएका छन् । हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता १ कसैकसैले मलाई जिस्काउँछन् । तिम्रा त थुप्रै भगवान् छन्, तिमीहरू पागल हौं । यतिधेरै भगवान् त कुनै धर्ममा हुँदैनन् यार । जवाफमा म पनि फुर्ती लाइदिन्छु– हामी कति भाग्यमानी छौं, भगवान्का भेराइटी छन् हामीसँग । जसलाई जस्तो जति पावरको भगवान् चाहिन्छ, हामी उस्तै भगवान् थोक भाउमा सप्लाई गर्न
जहाँ सबै इमानदार लाग्छन्
सञ्जय मित्र अहिले बिहानको दश बज्न लागेको छ । बिहानको चिया खाएका छौं तर मेरो बानी कस्तो छ भने बिहानै केही खानुपर्ने । बिहान उडिसामा पस्नासाथ चिया खाएका हौं । म चियासित बेग्लै खालको पाउरोटीजस्तो पनि अलिकति लिएको छु । नयाँ ठाउँमा अलिकति नयाँ परिकार खान मन पराउँछु । राम्रो लागोस् कि नलागोस्, त्यो स्वादको काम हो तर आपूmलाई पनि स्थानीय कुरामा अलिक फरक स्वाद लाग्दछ । यो चरम्पा हो । चरम्पा भन्ने ठाउँ त्यति ठूलो शहर होइन तर सानो बजार पनि होइन । सडकबाट हुइँकिदा भने दश मिनेटमैं नाघ्न सकिन्छ तर हामीलाई केही काम भने नगरी नहुने भएको छ । भद्रकमा तरकारी किन्नु छ र चुल्हो भएको सानो ग्याँस सिलिन्डर पनि बनाउनुछ । नबनाउँदा होटलमा खाना खानुपर्छ । होटलको खाना महँगो हुन्छ । त्यति स्वादिलो पनि लाग्दैन । आफैंले बनाएको र आप्mनो स्वाद अनुसार तरकारी पकाएर खाँदा सधैFं पिकनिककै आनन्द आउँछ । कालोपत्रे सडकमा नाङ्गो खुट्टा हिंड्दा निकै पोलेको छ, तर उत्सुकता छ बजार हेर्ने । रहर छ, मानिससित कुराकानी गर्ने । भोक पनि लागेको छ । केही नखाई हुँदैन । मौका पाउनासाथ पेटमा केही हुलिहाल्नुपर्छ, हैन भने सधैंजस्तो खान
दक्षिण एशियामा सङ्घीयता र नेपाल
श्रीमन्नारायण सैद्धान्तिकरूपमा देश सङ्घीयतामा गएको चार वर्ष बित्न लागेको छ । एकात्मक शासन प्रणालीको लामो पृष्ठभूमि बोकेको नेपालको निम्ति सङ्घीय संरचना अङ्गीकार गर्नु अवश्य पनि कठिन चुनौती थियो । बिस्तारैबिस्तारै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने काम भइरहेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको बेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले युरोप र अमेरिका महादेशका राष्ट्रहरूको राज्य संरचनाबारे बढी अभ्यास गरे, जबकि हामीले दक्षिण एशियाका देशहरूको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्दथ्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको करीब चार वर्षपश्चात् हाम्रा विज्ञहरू दक्षिणी छिमेकी भारतको सफल सङ्घीय ढाँचाबाट केही अनुभव लिने प्रयास गरेका छन् । दक्षिणी एशियाका कतिपय देशहरूले सङ्घीय संरचना आत्मसात् गरेका छन् । भारतको सङ्घीय संरचनालाई विश्वकै सफलतम सङ्घीय ढाँचा मानिन्छ । भारत र अमेरिकाले सङ्घीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको मूल्य एवं मान्यतालाई अक्षरशः आत्मसात् गरेको छ तथा यसलाई संविधानको पानामा मात्रै सीमित नराखेर व्यवहारमा पनि उतार्ने काम गरेको छ । सङ्घीयताको विषयमा अमेरिकी, अफ्रिकी र युरोपेली राष्ट्रहरूको प्रयोग
ब्राजिल र हामी
ब्राजिलको अमेजन जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आएको छैन । संसारको सबैभन्दा ठूलो जङ्गल अमेजनलाई विश्वको सम्पत्तिको रूपमा हेरिन्छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै विश्वका प्रकृति तथा वातावरण प्रेमीहरूले ब्राजिलियाली सरकारको विरोध गरिरहेको छ । विश्वमा अरू जङ्गलभन्दा बढी अक्सिजन अमेजनले दिने गरेको हुँदा विश्वको ध्यान यतिबेला अमेजनले तानेको छ । करीब ५५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको अमेजन जङ्गलमा दुई सातादेखि पूर्वी प्रान्त सान्ताक्रुज क्षेत्रबाट शुरू भएको डढेलोले करीब ७ हजार ७७० वर्ग किलोमिटर वनक्षेत्र सखाप पारिसक्यो । डढेलो नियन्त्रणमा उदासीन रहेको भन्दै फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याँक्रोले युरोपेली सङ्घ र ब्राजिलसमेत सहभागी दक्षिण अमेरिकी व्यापार क्षेत्रबीच तय भएको व्यापार सम्झौता रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । आयरल्यान्डले पनि व्यापार सम्झौता रोक्ने चेतावनी दिएको छ । ब्राजिलकै रियो डे जेनेरियो र साओ पाउलोमा हजारौं मानिसले सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । डढेलो नियन्त्रण नभए युरोपेली राष्ट्रहरूको व्यापार सञ्जालबाट ब्राजिललाई हटाउनेसम्मका दबाबहरू आइरहेका छन् । बाहिरी राष्ट
२०७६ भदौ १३ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंज महानगरपालिकाको सरसफाइले काँचुली फेर्दै
प्रस, वीरगंज, १२ भदौं/ वीरगंजको सरसफाइले फेरि एकपटक काँचुली फेरेको छ । साउनदेखि फोहर सङ्कलनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएपछि महानगरपालिकाको मेनरोड, सहायक रोडका साथै वडाहरूमा देखिएको फोहरका डङ्गुर अहिले कम भएको छ । महानगरपालिकाले सरसफाइ गर्दा घण्टाघरदेखि अलखियामठसम्मको क्षेत्रमा सफा देखिने गरेको थियो । त्यसपछिका नारायणी अस्पताल, श्रीराम हलचोक, भंसार अनि मीनाबजार, गहवा, मुर्लीचोक, पावरहाउस चोक, नगवाचोकहरूमा यत्रतत्र फोहरको डङ्गुर हुने गर्दथ्यो । साउन १ गतेदेखि महानगरपालिकाले पृथ्वीतारा, एनकेइ ज्वाइन्टभेन्चरलाई पहिलो चरणमा एक वर्षका लागि ठेक्का दिएपछि अहिले महानगरको सफाइले पहिलेको तुलना काँचुली फेरेको महसुस गरिंदैछ । अहिले मेनरोड, सहायक रोड र फोहरको लागि चर्चित मीनाबजार, मुर्ली, पावरहाउस, नारायणी अस्पताल र श्रीराम हलचोकका साथै अन्यत्र पनि फोहर देख्न पाइएको छैन । फोहर ठेक्कामा सङ्कलन हुन थालेपछि अहिले महानगरपालिकाका १०६ जना कर्मचारी ठेकदारसँग आबद्ध भएर काममा खटेका छन् । उनीहरूसँग ठेकेदारका १६४ जना गरी दैनिक २७० जना सफाइ कर्मचारीहरूले बिहान ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म र दिउँसो १ ब
पत्रकार प्रभा सिंहले दिइन् गुरुलाई काँध
प्रस, गरुडा, १२ भदौ/ सामाजिक अभियन्ताहरू समाजका अन्धविश्वास र कुरीति तथा पछौटेपन चिर्दै अगाडि बढ्छन् । समाजलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सामाजिक अभियन्ताहरू आफैं उदाहरण बन्दछन् । यस्तै उदाहरण बनेकी छिन् पत्रकार एवं सामाजिक अभियन्ता प्रभा सिंह । पत्रकार सिंह आप्mना राजनीतिक गुरुको अन्तिम यात्रामा सहभागीमात्र भइनन्, पुरुषले जस्तै गुरुको शवलाई काँधमा बोकेर घाटतिर पनि लगिन् । महिलाले मलामी जानुहुँदैन र अन्तिम संस्कारको लागि लाश लैजाँदा काँधमा बोक्नुहुँदैन भन्ने पुरातन मान्यतालाई पत्रकार प्रभा सिंहले बिहीवार चुनौती दिइन् । रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका विश्रामपुर निवासी राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रप्रसाद यादवको असामयिक मृत्यु भएपछि राजनीतिक गुरु भन्दै महिला सामाजिक अभियन्ता एवं पत्रकार प्रभा सिंहले काँध दिएकी हुन् । गुरुप्रति श्रद्धा अर्पण गरेको प्रतिक्रिया दिंदै पत्रकार सिंहले गुरुको अन्तिम यात्रामा गुरुलाई काँधमा बोक्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको बताएकी छन् । मधेसमा महिलाले शव बोक्न र मलामी जानुहुँदैन भन्ने पुरातन मान्यता रहेको छ । पत्रकार सिंहले शव बोकेर श्रद्धा व्
सुरक्षित अर्थतन्त्रका असुरक्षित कामदार
शीतल महतो कुनै पनि देशको युवाशक्ति त्यहाँको आर्थिक समृद्धिका लागि मेरुदण्ड मानिन्छ । तर नेपालको युवाशक्ति रोजगार–क्षेत्रको सीमितता तथा गुणस्तरीय, सीपमूलक र आत्मनिर्भरमुखी शिक्षाको कमीका कारण अति पीडित छ । आर्थिक विकास हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता झन् बढ्दो छ । न्यून आय, बढ्दो महँगी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यापारीकरणका कारण सर्वसाधारण नेपालीको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यहाँको अधिकांश युवा विदेश पलायन भएर वैदेशिक रोजगारमार्फत घर–व्यवहार चलाइरहेको छ । यसले निम्न आयस्तर भएका परिवारमा आर्थिक विकास र खुशीयाली ल्याएको छ । तर गाउँ नै रित्तिनेगरी युवापुस्ताको विदेश पलायनले देश विकासमा जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ भने यसले घर–परिवारभित्र दुःखान्त कथाको सिर्जनासमेत गरेको छ । गरीब, विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको घरपरिवारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकमले फुसको पुख्र्यौली घरको ठाउँमा पक्की घर बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांशले गाउँ शहरमा घडेरी र जग्गा–जमीन जोडेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले आप्mना सन्तानलाई स्तरीय निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । फ
विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दीको सङ्केत
विश्वराज अधिकारी नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको र बढी भारतप्रति आश्रित रहेकोले विश्व अर्थ व्यवस्थामा आउने हलचल वा परिवर्तनभन्दा पनि भारतको अर्थ व्यवस्थामा आउने परिवर्तनले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई प्रभावित गर्दछ । सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय अर्थतन्त्रको गुरुत्व प्रभाव रहने गर्दछ । विश्वका अन्य मुद्राको खरीद–बिक्री दर नेपालमा बजार (माग र आपूर्ति)ले निर्धारण गरे तापनि भारतीय मुद्राको खरीद–बिक्री दर निर्धारण नेपालको केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक) ले गर्दछ । विश्वका अन्य मुद्राको खरीद–बिक्री (नेपाली मुद्रासँग) दरमा परिवर्तन भए तापनि भारतीय मुद्राको नेपाली मुद्रासँग खरीद–बिक्री दर भने स्थिर (सधैं एउटै) रहने गर्दछ, किनभने भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनियम स्थिर दरमा हुने गर्दछ । यसरी स्थिर दरमा हुनुले नै नेपाल भारतीय अर्थतन्त्रप्रति बढी आश्रित छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । २०४६–४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि निर्माण भएका प्रजातान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक सरकारहरूले भारतप्रति अति निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै स्वतन्त्र पार्दै लग्नुपर्ने थियो तर ल
तीज भनेपछि महँगो खाना, सुनको गहना देखाउने चाड मात्रै हो त ?
वैद्यनाथ ठाकुर मानव समाजमा नारीलाई सत्ताच्युत गरी पुरुषले आप्mनो हैकम कायम गरेपछि तिथिमिति भन्न नसकिए तापनि प्राचीनकालदेखि मनाइँदै आएको अनेकौं हिन्दू पर्वहरूमध्ये तीज पनि एक हो । यो पर्व जतिधेरै धार्मिक छ, त्योभन्दा बढी नारीहरूले पुरुषको दासत्व ीस्वकारेको अवस्थाको द्योतकपनि हो । भनिन्छ यो त्यस्तो पर्व हो जसले नारीहरूको सन्ताप हरण गर्छ , हुनत यथार्थको कसीमा यो गलत साबित भएको छ । त्यसो त सनातन हिन्दू परम्परामा नारीको स्थान अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण छ । एकातिर अधिकांश पर्वमा नारी शक्तिलाई नै आदि शक्ति र मातृशक्ति भन्दै पूजा–अर्चना गर्ने प्रचलन छ र भनिएको छ– यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । अर्थात् जहाँ नारीको पूजा गरिन्छ त्यहाँ देवताहरू विचरण गर्छन् । अर्कोतिर तीजजस्तो पर्वमा आप्mनै पतिलाई भगवान् मानेर पुज्ने र उसैको चरण पखालेर जल आचमन गर्ने (पिउने ) परम्परामा झन् बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण पतिलाई देव मान्ने अर्थात् पति देव हो भन्ने बुझाइ नै हो । संस्कृतिलाई मानव निर्मित प्रकृति मान्ने हो भने परम्परागत पर्वबाट एकाएक विमुख हुन न ठूलो समूहले स